29-ka kulan ee ugufiican labada mobiles ee aan ku hayno Android | Androidsis
29-ka kulan ee ugu fiican laba mobiles on Android
Ciyaaraha laba mobiil si marka aan guriga joogno aan u soo jiidan karno dhismaha ama xitaa isticmaal hal kaliya si aan isla shaashadda ugala ciyaarno saaxiibkeen ama xubin qoyska ah.
Hadda waa xilli marka ciyaarahan la ciyaarayo noqo hiwaayad lama huraan ah adiga oo waqti badan oo firaaqo ah qaata gurigeenna. Waxaan ku sameyn doonnaa kulamadan aan rajeyneyno inaynaan cidna uga harin.
1 Dhibco iyo Khaanado - Ciyaar Istaraatiijiyad Caan ah
2 Hlow Hockey 2
4 Ereyada Asxaabta 2 - Erayada Asxaabta
8 Isbedelka xiddigaha
9 US dhexdeeda
14 Escapists 2: Jebinta Jeebka
15 Beeraha Qabille 18
18 Badda Battle 2
19 Laba Boqortooyo
20 Burburi halyeeyada
21 LOL: Hadiyad Duurjoog ah
22 Waydiisay 2
23 NEO: Kubbada
25 Dead by xilliyada
27 Wicitaanka Duty Mobile
28 Halyeeyada Runeterra
29 Xiddigaha Racing Battle
Dhibco iyo Khaanado - Ciyaar Istaraatiijiyad Caan ah
Ciyaartan wuxuu noo ogolaanayaa inaan ciyaar ku ciyaarno maxalliga ah isla mobilka sidaa darteed xitaa saaxiibkeen wuxuu ka tagayaa tiisa waxaanan u nimid halxiraalahan xiisaha leh ee aadka u balwadda leh.
Developer: Shirkadda 'OutOfTheBit Ltd'
Hlow Hockey 2
Waxaan nahay ka hor ciyaar aan mar kale ku raaxeysan karno isla kaniiniga si loo isku dayo in kaniiniga loo hor dhigo cadowgeenna. Iyada oo sawirada ay ka buuxaan neon, ciyaaro aad u xiiso badan oo xasaasi ah ayaa la tuuraa.
Mar labaad waxaan awoodi doonaa inaan ku ciyaarno gudaha, laakiin iyada oo loo marayo a taxane ah ciyaaro yaryar oo aan ku qasbanahay inaan feejignaano makaanikada cusub ee naloo soo bandhigay. Ciyaar leh jaantusyo wanaagsan iyo naqshad soo saarta waayo-aragnimo badan oo ciyaartoy badan.
Developer: Dhaafay7 Tijaabooyin
Ereyada Asxaabta 2 - Erayada Asxaabta
Zynga ayaa sii daayay Hit kale oo loogu talagalay erey kale oo erey ah kaas oo waxaan ku ciyaari karnaa khadka tooska ah saaxiib ama xubin qoys, ama weji ka soo horjeedda kuwa ka soo horjeedda ee ka yimaada meel kasta oo adduunka ah. Naqshad weyn, casri ah iyo wax kasta oo looga baahan karo nuucaan oo kale ah ciyaaro badan oo khadka tooska ah lagu ciyaaro.
Erayada Asxaabta 2 - Ereyga Ciyaaraha Laba
Laga soo bilaabo Clash Royale wax walba waan dhihi karnaa, maadaama ay mid tahay ee ugu wanaagsan 1v1 kulan waa inaan ku raaxeysanaa ciyaar deg deg ah. Waxaan la yeelan karnaa saaxiibo si aan ugu wajahno furitaanka kaararka oo aan ka sameysano shaashadda ugu wanaagsan ee aan u qaadan doonno kulamadaas waqtiga dhabta ah.
Dhamaan gurguurta godka godka kuwa ay jecelyihiin oo aan ku isticmaalno sixir, seefo iyo inbadan. Waxa ugu fiican ee ku saabsan Soul Knight waa taas waxaan la ciyaari karnaa asxaab isla isla xiriirka Wi-Fi ah, maadaama ay dhaqso u ogaan doonto ciyaarta si aad toos u gasho. Ciyaar bilaash ah oo adiga ku sugeysa wixii hada ka dambeeya.
Mid ka mid ah ciyaaraha ugu fiican ee aan ku ciyaari karno laba mobiil, maaddaama aan toddobaadyo iyo bilooyin ku qaadan karno dhismeyaasheenna, sahaminta, farsamada, ama aan wajahno madaxdii ugu dambeysay ee ugu dambeysay. Waxaa laga ciyaari karaa isku xirka maxalliga ah ee hoos yimaada WiFi ama loo maro kombuyuutar leh adeeg gaar ah. Ma ahan bilaash, haa, laakiin way u qalantaa.
Kuwa kale oo ka mid ah kulamada Supercell ee hadda socda taasna waxay noo ogolaaneysaa inaan ku ciyaarno 3V3 ciyaaro leh dhammaan waxyaabahaas oo sida caadiga ah la soo bandhigo waqti kasta oo aad u yar. Ciyaaraha dheereeya oo xamaasadda leh ee ay tahay inaadan seegin.
Shaki la'aan, hadda waa mid ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan ee laba-mobiil taasna waa lagu ciyaari karaa labadaba iyada oo la adeegsanayo xiriirka hoose ee WiFi iyo khadka tooska ah. Waxaad u baahan doontaa inaad baarto si aad u aragto mid ka mid ah ciyaartooyda kooxda ka dhex shaqeysa oo kali ah ... malaha waa adiga.
Mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagu ciyaaro laba mobiil sababtoo ah xaqiiqda ah inay ku taageerto multiplayer maxaliga ah hal shaashad taas oo labadiinaba aad ka geli kartaan si aad ugu raaxaysataan ciyaartooda. Madal aad ufiican oo naqshad gaar ah leh oo sanado badan kasbatay quluubta ciyaartoy badan.
8 ciyaartoy ayaa ku kulmi doona tan ciyaar aad u qarxan oo leh labo gool oo aan madadaalo la'aani ka jirin. Waxay bixisaa taageero amarka waana ciyaar xiiso badan dhammaan qaraxyada dhaca sida magaceedu tilmaamayo.
Kala xisaabtan hab multiplayer isla qalab markaa waxay noqoneysaa mid kale oo ka mid ah cayaaraha ugu badan ee ciyaartoy badan. Ma dhihi doonno waxba ka dhaha digaagga ay tahay inuu ka gudbo wadada iyo inaan ku aragnay taxane xitaa Disney.
Sidii ay ahayd isla Pong, ciyaar kale oo lagu ciyaaro multiplayer iyo xitaa waxaa lagu ciyaari karaa mobiil kale iyadoo loo marayo xiriirka Bluetooth. Xaqiiqdii tani waxay ka dhigeysaa ciyaar aad u qaas ah oo aadan u baahnayn inaad seegto haddii aad rabto inaad ka ciyaarto shirkad.
Escapists 2: Jebinta Jeebka
Maxaa ka yaabinaya Escapists 2, oo ay abuureen Kooxda 17 dambiilaha Worms guusha, maxaa yeelay Waxaan la ciyaari karnaa 3 saaxiibo kale oo dheeri ah oo ku saabsan multiplayer maxalli ah WiFi iyo shirqool si aan isugu dayno inaan uga baxno jeelka aan kuxiran nahay. Xaaladdan oo kale waa lacag.
Beeraha Qabille 18
Waxaan ka faalloonay Beeraha Qabille 18 xaqiiqda ah haddii aan dhowr ka helno isla isla xiriirka WiFi, dhammaanteen waxaan ku wada ciyaari karnaa isla beer in loo isticmaalo mashiinno culus ama loo soo ururiyo goosashada si loo iibiyo wixii la soo ururiyay. Ciyaar gaar ah oo ay tahay inaan ku bixino € 4,49.
Deked dhan oo SEGA Genesis ah iyo maxaa Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa multiplayer khadka tooska ah iyada oo loo marayo xiriirka WiFi laba mobiil. Dhamaan farshaxanka 'SEGA pixel art' ee raaxadaada ugu badan, oo leh ikhtiyaar bilaash ah oo leh xayeysiin illaa aad bixiso intaad ka saarto
Classic ka mid ah classics oo horeba iska leh dhowr jiilal ciyaartoy ah Waxay ku bilaabeen iyagoo dhisaya adduunyadooda ama galaya habka badbaadada. Waa ciyaar kale oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee loogu talagalay multiplayer maxalliga ah ama khadka tooska ah haddii aan u tagno lacagaha ay bixiso shirkadda 'Minecraft Realms'. Mid ka mid ah kuwa ugu fiican dabcan waa qiimo.
Badda Battle 2
Waxaan nahay ka hor midka waligiis ahaa midka wata doomaha ama quusa maraakiibta. Waxaa ku jira qaab maxalli ah oo lagu ciyaaro iyo xitaa Bluetooth si loogu xiro ciyaaryahan kale oo wata mobiil kale oo lagu raaxeysto quruxda iyada oo aan loo baahneyn wax warqad ama khad ah. Bilaash kiiskan.
Ciyaar aad u weyn oo lagu daaweynayo sawir gacmeedka oo leh farshaxanka pixel-ka oo aan ku dhiseyno boqortooyo yar. Haddii aan halkan ku hayno waa sababta oo ah shaashadda waxaa loo qeybinkaraa ciyaartooy sare iyo hoose. Waa qiimo sare.
Ofraysyadii ugu dambeeyay ee aan ku helnay Android oo annagana sidee waxay u horseedaa 3v3 kulan aad u daran iyo mid ka mid ah kuwa ciyaaraha loo yaqaan 'Arcade games' oo wata sawiro soo jiidasho leh iyo saameyn. Waxaad kaga ciyaari kartaa khadka tooska ah laba mobiil sidaa darteed ha moogaanin mid ka mid ah kulamada cusub ee mobilkaaga.
Developer: Ciyaaraha LINE
LOL: Hadiyad Duurjoog ah
Ya waxaan wadankeena ku leenahay heer sare oo ah MOBA taasina waxay ku timid heshiiskii ugu wanaagsanaa ee suuragalka ahaa heer kasta. Ku dar saaxiibkaaga oo u naxariiso labadiina kulan ee ka dhanka ah ciyaartoy kale oo leh fasalo badan iyo dhamaan nuxurka ciyaarta PC. Muhiim ah; ha moogaan fiidiyowga aan u sameynay munaasabadda.
Developer: Ciyaaraha Rabshadaha, Inc
Etermax wuxuu magac u sameeyay feerahan si uu tan ugu helo mid kale oo ka mid ah tusaalooyinka ugu fiican marka aan dooneyno inaan waqti fiican qaadanno oo aan ka badneyn madadaalada nafteena. Isbaanishka iyo labo ciyaaryahan ama ka badan.
Un ciyaar la mid ah mid aan ku hayno liiska laakiin markan qaab toosan si aan dhaqso ugu horumarin karno oo aan u helno nalalkaas neon-ka ee u roga ciyaar kasta mar labaad muraayad. Dhawaan ayey soo baxday, laakiin wuxuu kasbanayaa quluubta ciyaartoy badan. Waa lacag la’aan sidaa darteed cudurdaar ma leh.
Developer: Fil Filimka Ltd
Ma heli doonno ciyaaro toos ah, laakiin sida xaqiiqda ah waxaan heli doonnaa saaxiibkeen si aan uga hor tagno fiisigiska walxaha iyo a bistoolad toogasho ku timaadda qaniisado waxyeello u leh fiisigiska jirka. Farxad weyn daqiiqadaha ay bixiso oo waxay kuu qaadaysaa 64-ciyaartoy oo dheel dheel ah.
Dead by xilliyada
Freddy Krueger wuxuu dhawaan yimid dad badan oo khadka tooska ah ku ciyaara oo khadka tooska ah ka ciyaara kaasoo aan ku qasbanaaneyno inaan ka baxno qarowga. Waad awoodaa Waxaad u ciyaareysaa sidii nin xun filimka oo saaxiibkaa wuxuu kaa caawinayaa dadka kale inay ka baxsadaan. ka soo qarow. Ciyaar cajiib ah dhinac walba.
KU DHIM MOBILE DAYLIGHT - Ciyaar naxdin leh oo badan
Mid kale oo ka mid ah ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ugu caansan maanta oo aan ku tagi karno kulamadaas royale ee ka dhanka ah daraasiin ciyaartoy ah oo uu weheliyo saaxiibkiis. Aad ayaa loo cusbooneysiiyay oo sugaya nooca cusub inuu ku yimaado Android goor dhow.
DADWEYNAHA PUBG 1.5: JAHLI
Sida PUBG Mobile, oo leh Wicitaanka Waajibaadka waxbadan ayaa inala gudboon iyo qaabab kala duwan oo aan ugu raaxeysanno mid ka mid ah kuwa hadda ugu wanaagsan toogashada mobilada. Ciyaaraha Tencent halkan waxay muujinayaan muruq inay keeneen dhammaan khibradaha COD-yada sano. Dabcan, guul.
Wicitaanka Duty®: Mobil
Ciyaaraha kaararka waxaa jira seddex ama afar tayo aad u weyn oo midkoodna waa kan ka socda Ciyaaraha Rabshadaha si aad uga hor tagto saaxiib ama asxaab iska soo horjeedda. Dhammaan aqoonta-sida loo leeyahay daraasaddan si ay uga dhex muuqato kuwa ugu fiican qaybteeda labada kulan ee mobilada lagu ciyaaro.
Xiddigaha Racing Battle
Y Waxaan ku dhamaynay liiskan 29-ka kulan ee ugu wanaagsan laba mobiles mid ka mid ah ciyaaraha Halfbrick Studios taasna waxba ma tareyso ayaa na keentay Jetpack Joyride cusub. Midkaan waa inaan si qurux badan ugu orodnaa si aan ula ciyaarno ciyaartoy kale.
Xiddigaha Racing Battle - Ciyaaraha Tartanka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 29-ka kulan ee ugu fiican laba mobiles on Android
[VIDEO] 11-ka kulan ee ugu qabow Android waxay sii daayeen Maarso
10 codsi oo lagu iibsado oo lagula tashado Bakhtiyaanasiibka Kirismaska